Umzi-mveliso womatshini womkhenkce ityhubhu ye-5T kunye nababoneleli |Herbin Ice Systems
Ividiyo yokubonisa uvavanyo lwe-5T / usuku lomatshini womkhenkce womkhenkce kumzi-mveliso wam.
Ividiyo ebonisa i-5T / imini yoomatshini bomkhenkce ityhubhu kwisityalo somkhenkce sabathengi.
Masibale kunye nomatshini womkhenkce we-5T / wemini.
Ke yonke imihla, umahluko wokusetyenziswa kombane yi-30x5=150KWH.
(105-75) x 5 x 365 x 10 = 547,500 KWH, lowo ngumahluko wokusetyenziswa kombane kwiminyaka eyi-10.
Ukuba abathengi bakhetha i-5T / imini yomatshini we-ice tube, baya kugcina i-547,500 KWH yombane kwiminyaka eyi-10.
Ukuba umthengi ukhetha obunye ubuchwephesha obubuthathaka umatshini womkhenkce, uya kuchitha imali eninzi ukuhlawula loo nto ingenantsingiselo yosetyenziso lombane olongezelelweyo, 547500 KWH.
Yimalini kwi-547,000 KWH yombane kwilizwe lakho?
I-219,000 KWH yombane malunga ne-US$ 75,000 e-China.
Umthengi akayi kulinda ixesha elide ukuba afumane oomatshini bomkhenkce ityhubhu emva kokuhlawula.
Ngaphambili: 3T umatshini womkhenkce ityhubhu
Okulandelayo: 10T Umatshini womkhenkce weTube